तिथि मेरो पत्रु » जी-स्पट तथ्य र मिथ्या
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 23 2020 |2मिनेट पढ्न
तपाईँको G-ठाउँ पत्ता लगाउन संघर्ष? यो तपाईं Mirage chasing रोक्न र आफ्नो साथी संग एक स्वस्थ सेक्स जीवन भइरहेको ध्यान उच्च समय.
त्यहाँ कसको लागि रहस्यमय जी-स्पट orgasms लागि खोज कहिल्यै समाप्त भएको छ महिलाहरु लाखौं छन्. महिला सिद्ध clitoral orgasms अनुभव बाबजुद संभोग को यो फारम खोजीमा.
यो योनी orgasms सामान्यतया clitoral उत्तेजना मार्फत हासिल orgasms भन्दा बढी तीव्र छन् कि साँचो हो; तथापि, महिला को बहुमत द्वारा अनुभव orgasms प्रकृतिका clitoral छन्.
जबकि त्यहाँ मात्र clitoral उत्तेजना मार्फत orgasms भएको केही गलत, जो असफल महिलाहरु मा inferiority जटिल मा जी-स्पट परिणाम र कम यौन आत्म-सम्मान सँग सम्बन्धित मिथक धेरै जी-स्पट संभोग बारेमा कुरा हासिल गर्न. मजेदार यहाँ कुरा अनुसन्धानकर्ताहरूले अझै पनि छैन जी-स्पट अस्तित्व बारे विश्वस्त छौं कि छ.
जी-स्पट वा Grafenberg ठाउँ जर्मन चिकित्सक डा नाम हो. अर्नस्ट Grafenberg, जो पहिले योनी भित्र यो कामुक क्षेत्र बारे कुरा, बाटो फिर्ता 1950 मा urethra नजिक. धेरै 60 देखि सुझाव जर्मन डाक्टर द्वारा गरिएको थियो वर्ष बितिसकेका छन्, तर त्यहाँ अझै पनि जी-स्पट अस्तित्व को कुनै स्पष्ट प्रमाण हो, जो यो सिर्फ एक मिथक भन्ने विश्वास गर्न धेरै बाध्य छ.
एक हाल अध्ययन चिकित्सा पत्रिका क्लिनिकल एनाटोमी मा प्रकाशित बल्ल जी-स्पट घटेका मिथक भंडाफोड छ जस्तो देखिन्छ. अध्ययन अनुसार, मा orgasms विभाजन को धारणा जी-स्पट उत्साहित, योनी र clitoral बिल्कुल गलत छ. अध्ययन संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूले एक महिला अनुभव orgasms को सबै प्रकार को लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मात्र शब्द छ भने “महिला संभोग”.
भन्यो अध्ययनको दौडान, sexologists भनेर थाहा आए “आन्तरिक clitoris”, जो मिति योनी orgasms ट्रिगर विश्वास थियो, सिर्फ एक मिथक छ. Clitoris बाह्य अंग हो र महिला संभोग मार्फत धेरै खुशी प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ; कि यो छ.
तपाईं मस्तिष्क सबै भन्दा ठूलो सेक्स अंग मानिसहरूलाई छ छ भन्दै मान्छे सुनेका हुनुपर्छ. यो नयाँ अध्ययन पनि यस्तै कुरा सुझाव छ. अध्ययन अनुसार, महिला orgasms सामान्यतया मानसिक छन्.
वैज्ञानिकहरु महिलाहरु को लागि यौन सन्तुष्टि लगभग सधैं योनी संभोग आधारित छ कि फेला. यो राम्रो छ; तर महिला थप जटिल शरीर भएको एक परिणाम रूपमा बुझ्न छन्, तिनीहरूले orgasms सजिलै मानिसहरूको हुन सक्दैन. यसबाहेक, तिनीहरू केवल प्रवेश मार्फत संभोग हासिल गर्न असफल छन् बस किनभने तिनीहरूले कहिल्यै कमसल महसुस गर्नुपर्छ.
हो, तपाईं आफ्नो जी-स्पट केही समय मारा हुन्छ पछि orgasms अनुभव मा तिनीहरूले राख्न भन्न गर्ने महिला पूरा छौँ. तिनीहरूले झूट हुन सक्छ; तथापि, विशेषज्ञहरु विश्वास के महिला जी-स्पट उत्तेजना रूपमा बुझ्ने मूलतः तिनीहरूले अनजानमा undergo बाह्य उत्तेजना छ.
तपाईं नै लाग्छ किन तपाई सोच हुनुपर्छ. अब, एक उचित प्रश्न छ; सबैभन्दा तार्किक व्याख्या शायद फरक शरीर एक विशेष उत्तेजना अलग प्रतिक्रिया हुनेछ.
एक थप वैज्ञानिक व्याख्या हुन सक्छ त्यहाँ, तर किन कुरा थप जटिल बनाउन. अधिक तपाईं तल्लो आफ्नो सन्तुष्टि लब्धि हुनेछ लाग्छ छौँ; यति, बस आराम र सेक्स आनन्द.